XOG HOOSE: Madaxtooyada Soomaaliya oo ku mashquulsan in ay markale duulaan ku qaado dawlad gobaleedyada qaarkood, Yaase hadda bilow ah? – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES) – Xogaha hoose ee soo gaaraya Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa daaha ka rogaya in markii 2aad ay Madaxtooyada Soomaaliya bilowday duulaan kale oo ay weerar ugu qaadayso dawlad gobaleedyada dalka qaarkood, gaar ahaana kuwa ay u aragto in ay waqtigan ka soo horjeedaan siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo tan gudahaba.
Saraakiil katirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in Madaxtooyadu ay hadda qorsheynayso in weeraro ay ku qaado siyaasadeed Jubbaland, Koonfur Galbeed & Puntland oo ay u aragto in ay gabi ahaanba yihiin kuwa ka soo horjeeda hanaankeda siyaasiga ah.
Xogtu waxay banaanka soo dhigaysaa in ay jiraan Siyaasiin ka soo jeeda Dawlad gobaleedyada oo u badan dhalinyarro aan si weyn looga dhex aqoon siyaasadda ay bilaabeen in ay hadda ka dhex shaqeynayaan dhinacyadan.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si cad ay iskugu hanjabeen todobaadkii lasoo dhaafay Madaxweynaha Koonfur Galbeed SHariif Xasan Sheekh Aadan, oo ay isku maan-dhaafeen cidda noqonaysa gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka, waxaana shalay guuleystay damaca Xasan Cali Kheyre.
Sidaas oo kale Jubbaland siyaasiin ka soo jeeda ayay taageero badan u balan qaaday Xukuumada Faderaalka, si ay ugu yaraan u tusiyaan culeys xoog badan oo dhinaca siyaasada ah, waxaana hadda bilowday loolanka lagu qaaday Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Siyaasiinta ka soo horjeeda fikradda Axmed Madoobe ayaa hadda ku shirsan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxayna ujeedadu tahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen Madaxweynaha Jubbaland, si meesha looga saaro, xili uu dhawaan Muqdisho ka soo laabtay Faarax Macalin oo ah xubin mucaaradka Kenya katirsan, kana soo horjeeda dawladda Imaaraatka Carabta.
Puntland ayaa sidaas oo kale ay ka fakaraysaa Madaxtooyada Soomaaliya sidii ay Madaxweynaha maamulkaas ugu mashquulin lahayd arrimo hoose oo gudaha maamulkaas ah, si uga mashquulo arrimaha siyaasadda dawladda Faderaalka & Hardanka adag ee socda, waxaana xooga ay saarayaan in ay saameyn ku dhex yeeshaan Madaxda ugu sareysa ee maamulkaas.
Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa horey ugu fashilmay duulaankii ugu cuslaa oo ay ku qaaden dawlad gobaleedyada HIRSHABELLE, GALMUDUG, KOONFUR GALBEED, markii ay si adag uga hortageen maamulada Jubbaland & Puntland oo u arkayay in waxa socda ay yihiin wax lagu diidan yahay nidaamka Faderaalka ee Soomaaliya.
Bilihii lasoo dhaafay ee ay dalka hogaaminayeen Madaxweyne Farmaajo & Golaha Wasiiradda waxaa muuqata in la galay arrimo siyaasadeed oo xoog badan, kuwaas oo aan wali si buuxda looga nasan labo bilood oo isku xiga, waxaana muuqata in 23ka bilood ee fooda nagu soo haya maalmo badan oo kamid ah ay jiri doonaan Is heysi xoog badan oo dhinaca siyaasadda ah, haddii qorshaha dawlad gobaleedyada loo jiheysatana lama filayo in ay wax badan ka hirgalaan hanaanka doorashooyin madax banaan oo la sugayo 2 sanno ka dib.
Website kaan magacaa dadka puntland wadaa waxaaan kalaaa garanwaayey dadkaa masuulka kaha inay ay unyihiin 2 mid dad underage ah inay yihiin iyo dadaan wariyee yaal ahayn oo hadbaa sidaa ay jacelyihiin wax u qoraa waxaaa jiraaa iyo waaqicigaana aan waxbaaa kalaaa socon.
Ninkaloo wadanka purchase purinyaa wadankiinaa gatay wadamo shisheeyenaa ushaqanyaa puntland puntlandau babiyey garowe dusheedana maantay somaliland fadhidoo inaat xayeshiisaan itinkoo wax walbaa og waxay ceeb kutahaye website kaan iyo hadiiba aatihiin suxufiyiin sharaftiinaa
Aniguu waxaanot kasoo jeedaa puntland garahan galcyo laaakin in aan shaqsi ku taageero qabiil waxaa kawanaaysan inaan taaa gearbox waxkasta a oo umadaa somali yeedhay wanaageedaa kujirof.
sxb wesite kan sirdoonka maraykanka iyo itoobiya iska leh, ka fiirso anigu maba soo booqdo si lama filaan ah aya iigaga dhacday moyane, website kan malaha somali taas aya jirta, dadka wax ku qoraana waa snm iyo xabashi
Adigu ma waxaad ka danqatay qoraalka runtaa e webku qoray?
Fataal xunoo qolo musqulha u dhaqa baad tahay e Puntland iyo siyaasadeeda ka fariiso!
Viiva Sheikh, M/weyne Gaas
ashkir ismail says:
wllhi web wuxuu qoro waa wax macquul ah caadi qaate muqdisho waxa Kaso qaate donimeeno madaxweyne gaas puntland wax buu uqabte madaxweye madaxaada allaah raajiciyo
aniga waxay ila tahay in gaas khaldan yahay sabbab too ah markay Itopia faragalin jirtay weak walba ithopia ayuu iska xaadirin jiray. su aashu waxa weeye muxuu uGu ordaa ciday dawlada is qabtaan??
gaas waa sirdoon, taas ma ogid waa C I A
cabdu laahi says:
gaas wuxuu ka shaqaynayaa waxyaabaha puntland ay dantu ugu jiryo
Waxaaaa ilaahay mahadiisaa in maantaa cabdi wali gas.ay ogyihiin dadka reer puntland waxaaaa uu. Yahay iyo ciduu ushaqeeyo waxaaa jirtay xilii la dhagaysan jiray waxaaa uu yiraahdanaa la oranjiray a may macquul yihiin laakin mantay waa ugaaa dhamaatay puntland iyo guud ahaan Somalia oo dhan marka 5 bilood baa u hartay has ka uruursado dadka masaakiinta ah shilinkoodaa .
Waaa dhamaatay xiligiii la oranjiray kanii waa inaa adeer kay kanii waaa tolkay qofkii dadka iyo dalka wax uguuu yaal baaa wax noogusoo ah laakiin . not spy person
Ciyaalkaan Hadal baradka ah, ee Siyaasad ka hadlaya, waa wax la yaab leh ee aan xishooney Cid kasta wax ka sheegaya, War Puntland Federaalka ayey ka tirsan tahey, mana diidin, is weydiiya waxa meesha yaal. wa shrciga Maamulada kala haga oo aan jirin, waa dastuurkii dowlada oo la leeyahey mar waa la xadey marlkalena la leeyahey Koobi baa la hayaa, la iskama hadlo maxaa lagu socdaa ee lagu kala hagayaa awoodaha Dowlada dhexe iyo maamulada? lama hayo dastuur maxaa lagu eedeynayaa Madaxweyne Cabdi wali haduu Maamulkiisi Howl u hayo, dawladii uula shaqeeyo, waxey ila tahaey qas baa la wadaa iyo in aan dab la kala qaadan iyo bur bur waliba dowlada dhexe ah, dad baana wada, weyna ku fashilmayaan, kala tag iyo habsaam ay somaliya doorasho geli weydo ayaa imaaneyso, war Cagaha dhulka inoo dhiga,.
inta badan website yada puntland waxaa gatay C I E da waa wada basaasiin,
xataa kuwa komentiyada u qora sida midka wata cabdiwli ee halkan wax ku soo qorqora iyo kan wata cabdulahi waxaba waa wada basaasiin la kiraystay.
dad badn oo la kiraystay aya jira oo websito iyo komentiyo la wareegaya enternetka.
ha la iska ilaaliyo dadow.
Cabdiwali waa qof wax-qabtay, waxna qabandona, kuwa caynayana waa canaasiir iyo cadowga Puntland.
Waa madaxweynaha ugu waxqabadka wanaagsanaa, mar labaadna waa la doorandonaa haddii isa sharaxo.
Dadka reer Puntland waa dad aragti dheer oo waa yaqaanaan qofka waxtarka ah iyo doqonka dadka kale warka usoo dhiibtaan.
Reer Puntland ma doonayaan inay doqoni u sheegto inay imaaraad cadowga Puntland tahay ee waa walaalaheen, dan dhaqaale iyo mid ganacsiba inaga dhexeeyo. Waan ka dharagsanahay danaha Turkiga iyo Qadar, danta Puntlandna kama shaqaynayaan ee qiiq bay isku qaniyaan.
dadkaas basaasiinta ah waxay buunbuuniyaan gaas iyo imaraadka, saa ula socda.
waxaan hubaa in midkaan daaha gadaashiisa kasoo sharqamaya uusan ahayn iidoor.
iidoor hadii uu xaataa daaha gadaashiisa ka hadlayo ma qariyo iidoornimadiisa…. taasuna waa raganimo aan ku qadariyo iidoor.
waayahay aanu usoo noqono ka daaha gadaashiisa ka dhawaaqaya. waxaan leeyahay shaqsiyaadka daaha gadaashiisa ka dhawaaqa in ay cabsan. meesha CIA iyo amxaaro ma joogto oo cid madaxa ku jaraysa ma jiraan ee karti isu yeela oo cidaa tihii iyo kooxdaa tihiin muujiya si aanuh warka isula helno. shaqsi kastoo soo gala halkan waa madax banaan yahay. hadii aad adigu laguu soo dirsaday hadee cidii kusoo dirsatay useeg in aad guul daraysatay. tankale waxana kuleeyahay wakhtiga ha isaga qaadiin far ku fiiqa iyo dacaayada aad u wadid Md Cabdiweli. reer puntland waa ogyihiin in cadowga puntland uu madaxda puntland abaaro
oo weeraro dhan kasta ah ku qaado .
reer puntland way xasuustaan waxii in kala qabsaday iyo cadaawadii aad kula kici jidheen Cabdulllahi Yusuf, Cade Muuse Iyo Faroole . reer puntland wey ogyihiin in aydaan madaxda puntland aydaan u socon ee aad duulaan ku tihiin jiritaanka reer puntland. maanta MD Cabdiweli hadii meesha uu ka tago waxaa la arkin idinkoo faaninaya oo kusoo dhaweeynaya guryihiina idinkoo ragiinu durbaan u tumayo dumarkiinuna ulu’ ulu’dii ka damaatay. tassu waxay xaqiijinaysaa in aydaan cadow ku ahayn cabdi weli oo aad cadow ku tihiin reer puntland iyo jiritaankooda oo kii cabdiweli ka dambeeya aad cadownimo sidaas iyo si kadaranba ku la kacaysaan. shaki kuma jiro in reer puntland aydaan waligiin ka guulaysanahayn.. hadii aydaan cadaawada iyo cuqdada inka buuxda ka toobadkeenin waxaa hubaal ah in aad ku waabariisataan Puntland oo xor ah oo aad basaboor kusoo gashaan.
Waxaan u maleynayaa taasi waa tii waqtigii ka dhameysey Xasan shiiq, isaga oo ku jirey Dagaal Maamulada ah.
Qatar baa ugu sheekaysay in maska madaxaa laga dilo. waxay moogan yihiin in puntland leedahay dowr milyan oo madax.